एमालेकाे केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आयाे यस्ताे प्रस्ताव, त्यसै त भाँडभैलाे फेरि अर्काे नयाँ तरंग
September 25, 2021 N88LeaveaComment on एमालेकाे केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आयाे यस्ताे प्रस्ताव, त्यसै त भाँडभैलाे फेरि अर्काे नयाँ तरंग
नेताहरूको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण हुनसक्ने उपाध्यक्ष पदको संख्या घटाएर ३ मा सीमित पार्ने प्रस्ताव आएपछि अध्यक्ष नपाएको अवस्थामा उपाध्यक्षमै बस्न खोज्ने धेरै नेताहरूलाइ झस्का पसेको छ । त्यसैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा संख्या बढाउनुपर्ने माग भएको छ । काठमाडाैं । एमालेको विधानमा उपाध्यक्ष संख्या घटाएर ३ बनाएपछि शीर्ष तहको नेतृत्व व्यवस्थापनमा जटिलता देखिने भएको छ । त्यसैले केन्द्रीय […]
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवाससमेत चीनको ‘कब्जा’मा, चलिरहेकाे छ हाकाहाकी यस्ताे गतिविधि !
September 25, 2021 N88LeaveaComment on राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवाससमेत चीनको ‘कब्जा’मा, चलिरहेकाे छ हाकाहाकी यस्ताे गतिविधि !
काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रपति कार्यालय चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको जीवनी समेटिएको पुस्तक सार्वजनिक गर्ने थलो बनेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको विचार र उनले गरेका कामको नेपालमा प्रचार गर्ने माध्यम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बनेकी छन् । नेपाली स्वाभिमान र स्वाधिनताको धज्जी उडाउँदै चिनियाँहरुले नेपालको सर्वोच्च निकायलाई पुस्तक प्रचार विभाग बनाएका हुन् । कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि भए पनि […]
माधव नेपालकाे नेकपा एसबाट काे काे बन्दैछन् मन्त्री ?
September 25, 2021 N88LeaveaComment on माधव नेपालकाे नेकपा एसबाट काे काे बन्दैछन् मन्त्री ?
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले आफूहरुविरुद्धको मुद्दा किनारा लागेकाले अब छिट्टै सरकारमा सहभागी हुने बताइन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको विरुद्धमा परेको रिटमा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब सरकारमा सहभागी हुने र पार्टीभित्रका अरु काम अघि बढाउन सहज भएको उनको भनाइ छ । शनिबार विराटनगरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दैै उनले भनिन्, ‘हिजोदेखि […]
माधव नेपाल छाडेर एमालेमा बस्नेहरु समूह नेतामा छानिएनन्, काे काे बने टाेली नेता ?
September 25, 2021 N88LeaveaComment on माधव नेपाल छाडेर एमालेमा बस्नेहरु समूह नेतामा छानिएनन्, काे काे बने टाेली नेता ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समूहगत छलफल सकिएको छ । समूहगत छलफल पछि टोली नेताले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सुझाव प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । १५–१७ असोजमा हुने विधान महाधिवेशनमा पेश गरिने राजनीतिक, संगठनात्मक र विधान संशोधन मस्यौदा माथि समूहगत छलफल भएको थियो । समूहगत छलफलमा केन्द्रीय सदस्यहरुले राखेको सुझाव समूह नेताहरुले केन्द्रीय […]
भरतमोहन* अधिकारीकी छोरी एकिकृत समाजवादीमा प्रवेश, सक्रीय राजनीतिमा आउने !
September 25, 2021 September 26, 2021 N88LeaveaComment on भरतमोहन* अधिकारीकी छोरी एकिकृत समाजवादीमा प्रवेश, सक्रीय राजनीतिमा आउने !
काठमाडाैं । वरिष्ठ वामपन्थी नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री स्व. भरतमोहन अधिकारीकी छोरी लीमा अधिकारी सक्रिय राजनीतिमा आउने भएकी छन्। लीमाले माधव नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीबाट राजनीति गर्ने भएकी हुन्। पार्टीले उनलाई बागमती प्रदेश कमिटी सदस्यसहित अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय पदाधिकारी र संघको अर्थ विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। लीमा यसअघि भरतमोहन अधिकारी […]
ओली समूह हामीलाई भोट दिनुस, ६ महिनामा ससंद विघटन गरेर आउँछौ भन्दै गाउँ जालान् ? झाँक्री
September 25, 2021 N88LeaveaComment on ओली समूह हामीलाई भोट दिनुस, ६ महिनामा ससंद विघटन गरेर आउँछौ भन्दै गाउँ जालान् ? झाँक्री
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) की सचिव रामकुमारी झाँक्रीले आगामी निर्वाचनमा गृहजिल्ला गुल्मीबाट लड्ने बताएकी छन्। पार्टी केन्द्रीय सचिवमा चयन भएको भोलिपल्ट उनले यस्तो बताएकी हुन् । शुक्रबार गुल्मी-काठमाडौँ सम्पर्क मञ्च भेला आयोजक कमिटीले काठमाडौंको थापागाउँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले अब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गृहजिल्ला गुल्मी नै हुने बताइन्। एमालेबाट समानुपातिक कोटाबाट संघीय […]
नेकपा एस र माओवादी केन्द्रले टुंग्यायो मन्त्री, काे काे बन्दैछन् मन्त्री
September 25, 2021 N88LeaveaComment on नेकपा एस र माओवादी केन्द्रले टुंग्यायो मन्त्री, काे काे बन्दैछन् मन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धनका दलहरुले मन्त्रीको नाम नदिँदा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न सकस भएको छ । लामो समयदेखि मन्त्रीको नाम मागिरहेका देउवालाई गठबन्धनका दलहरुले विभिन्न शर्त राख्दै मन्त्रीको नाम दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । यता, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र भने मन्त्रीको टुंगो लगाउन छलफलमा छ । जनता समाजवादी पार्टीले भने अध्यादेश […]
बामदेवकाे बकबक : ‘म केपी ओली भन्दा सिनियर हुँ उमेरले पनि जिम्मेवारीले पनि’
September 25, 2021 N88LeaveaComment on बामदेवकाे बकबक : ‘म केपी ओली भन्दा सिनियर हुँ उमेरले पनि जिम्मेवारीले पनि’
काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट राजीनामा दिएका नेता वामदेव गौतमले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बस्न नसक्ने पुनः स्पष्ट पारेका छन् । एमालेले आफ्नो राजीनामा अस्वीकृत गरेको सुनेपछि नेता गौतमले भने, ‘म एमालेमा रहन सक्दिनँ भनेको थिएँ, राजीनामा दिएपछि सकियो !’ नेकपा एमालेले तपाईको राजीनामा अस्वीकृत गरेछ, निर्वाचन आयोगमा पनि नाम पठाएछ नि भन्ने प्रश्नमा नेता गौतमले […]
प्रचण्डको पार्टीका ‘नव युवराज’को चर्तिकला लाै हेर्नुस्
September 25, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्डको पार्टीका ‘नव युवराज’को चर्तिकला लाै हेर्नुस्
भरतपुर । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता एवम् उप–राष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनले चितवनमा ‘नौटंक’ देखाएपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ । उप–राष्ट्रपति नन्दबहादुरका छोरा दीपेश सरकारी सेवासुविधामा बस्छन् । दीपेश माओवादीको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका पदाधिकारी समेत हुन् । बाबु नन्दबहादुरको सरकारी रवाफ, सेवा सुविधा र शान देखेर हुर्किएका ‘नव युवराज’को उपमा पाएका दीपेशले […]
श्रीपेच चोर्न खोज्ने खेमबहादुरको बयान सुनेर प्र’हरी नै चकित
September 25, 2021 N88LeaveaComment on श्रीपेच चोर्न खोज्ने खेमबहादुरको बयान सुनेर प्र’हरी नै चकित
काठमाडाैं । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयबाट श्रीपेच चोर्न खोजेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा रुकुमको मुसिकोट नगरपालिका घर भइ हाल काठमाडौँबस्ने खेमबहादुर घर्ती रहेका छन् । उनको मा’नसिक अ’वस्था ठिक नभएको भन्ने जानकारीमा आएको र घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंहले जानकारी दिए […]